पाठ्यपुस्तकको अभावमा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित – इन्सेक
शैक्षिक सत्र सुरू भएको आठ महिना बितिसक्दासमेत हुम्लामा पाठ्यपुस्तक नपुग्दा विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा समस्या भएको छ ।
सिमकोट गाउँपालिकास्थित कर्णाली मावि, कान्ती निमावि, कैलाश मावि, सैपाल हिमाल मावि, मानसरोवर मावि, बालमन्दिर मावि, भिमसिङ्ग प्राविमा पाठ्यपुस्तकको अभाव भएको छ । यसैगरी खार्पुनाथ गाउँपालिकास्थित सिता मावि, मालिका मावि, हुम्ला मावि, मानधारा मावि र सर्केगाड गाउँपालिकास्थित कोट मावि, सर्किदेउ मावि, सूर्यदय मावि, हिमज्योती मावि लगायत जिल्लाका ३३ ओटा विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या भएको कान्ती निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रद्यानाध्यापक निर्प शाहीले बताए ।
हुम्ला जस्तो विकट जिल्लामा रहेका विद्यालयमा कक्षा एकदेखि पाँच सम्मका पाठ्यपुस्तक असोज २४ गतेसम्म नआउँदा करिब ७ हजार बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् । 'शैक्षिक सत्र सुरू भएको आठ महिना बितिसक्यो तर हामीले कहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक पाउने हो ? आशा गर्दागर्दै अर्धवार्षिक परीक्षा पनि बित्ने भयो । हामीले पुस्तक नपढी कसरी पास हुने ?'-कर्णाली माविमा कक्षा ५ मा अध्यनरत जीवन सिंहले गुनासो गरे ।
त्यस्तै सैपाल हिमाल माविका प्रधानाध्यापक देवबहादुर बुढाले भने-'शैक्षिक सत्र सुरू भएको पहिलो हप्तामा पाठ्यपुस्तक माग गरिएपनि आठ महिना बितिसक्यो । अहिलेसम्म पुस्तक प्राप्त हुन सकेन ।'-उनले भने-'पाठ्यपुस्तक नभएपछि हाम्रा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । यस विषयमा पटकपटक जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएन ।'
प्रधानाध्यापक बुढाका अनुसार केही विद्यालयमा पुराना पाठ्यपुस्तकले पठनपाठन गरिरहेका छन् भने केही विद्यालयमा पुरानो पुस्तक समेत नहुँदा अर्धवार्षिक परीक्षा समेत प्रभावित हुने भएको छ । हुम्लामा फागुन महिनाको पहिलो हप्तादेखि शैक्षिक सत्र सुरू हुने गरेपनि असोज महिनाको चौथो हप्तासम्म पनि पाठ्यपुस्तक बालबालिकाले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी मदनकुमार थापाका अनुसार पाठ्यपुस्तक माग गरेपनि समयमा प्राप्त नभएको बताए । उनले भने-'जनक शिक्षा र साझा प्रकाशनको ढिलाइले यस्तो भएको हो ।' असारमा पाठ्यपुस्तक नेपालगञ्ज पुगेपनि अहिलेसम्म हुम्लामा नपुग्नु ठेकेदारको पनि कमजोरी रहेको उनको आरोप छ । किताब लैजाने ठेकेदार ज्ञानबहादुर रोकायाले हुम्लामा भारतीय तिर्थ यात्रीले गर्दा समयमा पाठ्यपुस्तक पठाउन समस्या भएको प्रतिकृया दिए ।